DAAWO VIDEO:waraysi yaab leh waran cade”Itoobiya Ciidamo hanoo Soo dirto Muqdisho Ayaa nagala Soo Weerarayaa” – Marqaanmedia24.com
March 19, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 22
cali waran cade Ayaa waraysi uu bixiyey waxa Uu uga Hadlay Khilaafka Imaraadka Iyo siyaasada ay ka Abuurtay Soomaliya.
waxa uu isku Tilmaamay inay Soomaliland tahay naag Soomaaliya qabto Oo Doonaya Inay iska fasaqaan mar hadii la Furi waayey.
itoobiya Mar uu ka hadlay waxa Uu tilmaamay cadowga Soomaaliya Inay a Celinayso.
DEG DEG:Xildhibaanada Digil iyo mirifle ee Dowlada faderalka oo Mooshinka jawaari ka Horyimi
DAAWO VIDEO:Dayax Dal Nuurshe Muuqaal Cajiib Hargeysa Showgii Ugu Dad Badnaa 2018
HESHIIS ISKAASHI DIFAAC BAA NAGA DHAXEYA,AYUU YIRI HADALKA MAJARAHA HA KA DUWINA.
Haddii ay run tahay oo uu Cali waran Cadde yiri hadalka kor ku qoran ee ah Itoobiya hanoo soo dirto ciidamo naga difaaca duulaan nooga imaan doona xamar waa daciifnimo.Haddii uusan orana ee laga suubiyey maba uu oran oo beenu raad ma leh.Laakiin waxaa bayaan ah oo an shaki ku jirin in ay madaxda hargeeysa ay soomaali uga kalsoon yahiin Itboobiyaanka.Taasoo la mid ah Xarig Galab Caraabo Yuusan ku Rarin Nimaan Kuu Furi Doonin.Itoobiya soomaali oo dhan waa u wada cadaw iyo nacab.
Waxaan shalay arkay meel ad iigu gaftay oo ad waliba adan waxba iila harin.Intaan arkay waa markii afraad ee ad si ula kac ah ad iigu gaftid.Mudo badan baan kuu soo dulqaadanayey.Mudo badan baan kaa soo difaacayey Mooryaan iyo JEEGAANBA.Haddana anigiii baad Mooryaan igu noqotay.Wayse inoo tahay hadda laga bilaabo.Kumase darin haddii ad qiranaysid aabigaad ila baratay.Ma ihi nin iskala booda eray an dhib lahayn ee waxaa aad u tiro batay aflagaadadaada ad ila soo aadid.
@ War Atoore,
Wallaanan ujeeddo kuugu gafin ee dood fadhi-ku-dirir ah ayuun baan is lahaa is kaga dhici kol haddii uu SNM-tii kuu jabiyay. Haddii uu jiro hadal aad iga qoonsatay raalli gelin iyo xaal marin buuxa ee tolnimo, saaxiibtinimo iyo macaariifnimo ba leh ayaan kaa siinayaa.
Waan ka xumahay in aad xumaan iga tabatay waayo waa runtaa oo SI AAN LA QIYAASI KARIN EE GEESINIMO IYO HAGAR BAX LEH ayaa runtii marar badan mooryaanta iyo cayayaanka iga difaacday. Waxaan kaaga qabaa ABAAL IYO MAHAD aan la koobi karin Jaalle Atoore. Laakiin ina-adeer aniga oo ay shuftadu i xabbadeyneyso ayaad adigu na bahal baas ah docda igaga soo furtay oo boodhkii indhaha igaga saydhiyay kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
SOMALILAND AIR FORCE
War meeshan wali ragu ma ku kaftamaa.
Waa idin salaamay dhamaantiin
Ethiopia in heshiis ganacsi lala yeesho way fiican tahay lkn in la isu duleeyo ma qabo .
Somalidu ha aaminto geeska africa inay iyagu leeyihiin ugu dhul weyn yihiin ,dhul istaratiji ahna leeyihiin qoladii heshiis la galaysa wadan kale ha noqdo heshiis dadkooda ay ugu danaynayaan oo anfacaya .
Lkn yaan lagugu danaysanin .
Sheekaddi waxay Maraysaa Ethiopia noo soo Gurmada idinkaa naga xiga wiilka ku dhashay somaliya. Ethiopia iyaddi baa teedi la wareersan oo ilaa maanta wey ku heshiin waayeen ninki prime minister ka noqon lahaa Dalka. Oromadiina wey kacsan yihiin oo iyagaa hadda madaxa la hayaa.
Nin Tiisu Cuslaysay Tu kale kuma Daro. Ethiopia iyagaa qarka u saaran Civil war iyo in lagu kala Guuro. Reerki Isaaqa ahaa Ceeb baa haysata Somali Nacayb miyey ka tahay mise SNM dirty Tricks.
Cid weerar ku ah Beesha Dhexe ma jirto Laakin waxaas oo qaylo dhaan ah sheeko kale ayaa ku jirta. Laakin sheekadoodu waxay u egtahay in ay ICTIRAAF ku doonayaan qaylo dhaanta ka socota Reerka.
Isaaqa Taariikhdooda ayaan weli kaa sugayaa oo qoran sida
1- meeshay ka yimaadeen
2-xagay ka soo jeedaan
3-yey ku abtirsadaan
4-ma carab baa mise Oromo mise Habar Xabuusheed
Taariikh baan kaa sugayaa Aniga SNM iyo jabhad ha iga sheekayn.
Wax cusub madasha ma uusan keenin ee beentii iyo barabagaankii fallaagada SNM lagu aasaasay iyo been kale oo ka sii daran ayuun buu odaygu ku hadaaqay. Marka hore yaan la hilmaamin in uu isagu ba yahay gacan-dhiigle qabiilkiisa Isaaq dagaal la galay isaga oo Dawladdii Kacaanka cabsan oo matalaya. Isaga ayuu waajibku ahaa in ay Isaaqu xabsiga dhigaan laakiin waynu is wada ognahay.
Xaqiiqadu sida ay tahay iyo qaabka ay qoladani u majara habaabiyeen waa kaaf iyo kala dheeri. Fallaagadii SNM dawlad ayay dagaal isku la jireen. Dawladdaasu mid ay Soomaalidu ku dhantahay bay ahayd oo ciidamadeedii ay fallaagada SNM-ta gorodda is dareen waxaa ka buuxay oo hoggaan sare ka ahaa qaar badan oo Isaaq iyo Samaroon ka dhashay ee uu Waran Caddahani ka mid ahaa.
Dawladdaasu Soomaalida badankeedii ayaa ku kacay oo ku gadooday oo buburkeedii qeyb libaax ka qaatay. Dagaalku ma ahayn mid ‘Koonfur’ iyo ‘Woqooyi’ ahaan loogu kala baxay oo la isugu dhacay. Mana ahayn dagaal Isaaqa qabiil ahaan loogu goobtay inta ay Soomaalidu u tashatay. Aafaadkii dhacay Ciisaha iyo Samaroonku ba way saameeyeen. Qabiil gooni ahaantii nacayb iyo cuqdad gaar ah ee loo qabay lagu laayay xaajadu ma aysan ahayn sida loogu been abuurtay. Meeshii dagaal hubeysani ka dhaco na shacab baa ku waxyeellooba.
Been cad oo uu weliba ku deelqaafayo ayuu ka sheegay qaabkii uu u dhacay isku darsankii BSLP iyo ISLP – “tuuganimo ayaynu wax iskugu darsannay”. Waa hadaaq lagu qoslo runtii. Gobollada Woqooyi markii xorriyadooda la siiyay UN-ta ayaa hakad gelisay inta kuwa Koonfureed ay xorriyadooda qaadanayaan afar cisho ka dib. Muddadaas iyo intii ka dambeysay waxaa heer caalami ah lagu qorsheynayay in labada la isku daro. Maanka iidoor ayuu ku hadlay oo uu ku aflagaaddooday oo waa kaas Soomaalida kale ee geyiga la wadaagta xisaabta ba ka saaray. Geyigu na waa 99% Soomaaliya iyo 1% Somaliland. WADAR iyo WAAXID yaa waalan weeye su’aashu.
Saan Xalayba ku idhi odayaal dhin dhintay oo lasoo taxaa maanta wax kaa dhicin maayaan. Fac baan leeyahay iyo waxaasaa ahaan jiray meel ay maanta iyo waaqiciga taagan kasoo gasho oo furani ma jiraan. Saldanado ayaanu ahaan jirnay iyo futuu fataa maanta maxaad ka heysaa. Geyi Cidlo ah oon qalalan ayaad oon ugu dhimanaysaan sida dadka kale ee degaanka aad isla degen tihiin. Dadkii waad ka hadheen oo xitaa kuwiinaas dibadaha joogaa waad garanweydeen dadkii kaleba magaalooyinkoodii wey dhisteene idinkuna bal kuwiina dhista oo hagaajista. Weli afar Cooshadood oo illaa iyo Suldaanadan aad soo taxtay ilaa iyo imika soo yuub yuubnaa ayaad weli leedihiin.
Hadaba anaa talo kusiinayee odayadan kolba aad qabriga kasoo kicinayso iska daa oo faraha kala bax. Wakhtigu yaanu kaaga dhicin. Inta aad sheeko aanan gambo ayaa ugu yara soo kordhinayn ku mashquulsantahay ku mashquul in aad dadkaada wax u tarto. Daarood iyo Isaaq waa dad Soomaaliyeed. Daarood hadii aad Qowmiyad ku mitaashaan, Hawiye wuxuu noqonayaa Qowmiyad, Isaaqna Qowmiyad, Qabiilada kale ee Soomaaliyeed ee waaweynina waxay wada noqonayaan Qowmiyado. Hadii qabiilo la noqonyana qabiiladaas ayaa la ahaanayaa.
“odayaal dhin dhintay oo lasoo taxaa maanta wax kaa dhicin maayaan.”
IN BADAN OO HORE AYAAN KAA WAANIYAY HADAAQ DHOOCILEEDKA GOODDINTA KU SALAYSAN. YAAN U BAAHNAHAY IN LA IGA DHICIYO EE AAD U JEEDDAA ADIGA REER AWDAL AH? WAR WARSANGELIGU MAQAAMKA UGU SARREEYA EE AY SOOMAALIDA KU LEEYIHIIN DOQON UUN BAA DHOOHAN.
HADDII AAD SIDAADII IIDOOR AHAAN U GOODDINEYSO DEE WAA INAGII BAYAAN KUUGU CADDEYNAY IN MAALINKA AAD AFAARAHA WARSANGELI SOO FARO GESHATO ADIGA UUN LAGUU YAABI DOONO. MISE XABASHI BAAD U HABAR WACAN SIDA UU WARAN CADDE KASHIFAY?
MARKA AAN AQOON KUGU SAXO, “AFTIRTIINSIIYO” MA AHA EE “ABTIRSIINYO”. MARKA AAN CILMI KUGU SAXO NA DAAROODKU WAA QOWMIYAD LAAKIIN INTIINAN KALE WAXAAD TIHIIN QABIILO. SOOMAALIDU NA WAA ‘UMMAD’. SIDAAS U KALA BARO.
Shaqo ayaan kusii socdaa ee aan bal fariin yar ood xalay ka tagtay kaaga yara jawaabo. Daarood xili uu qabiil ka tegay oo uu Qowmiyad gaadhay anigu ma ogi. Soomaali ayaa Qowmiyad la yidhaahdaa. Hase yeeshee hadii aad ku asteysay ood faantay Qowmiyada Daarood, dee ana Qowmiyada Isaaq ayaan kasoo jeedaa. Qowmiyada Hawiyena haka tegin. Ta dadka kaleeto oo dhana haka tegin. Qowmiyad hadaad ku doodayso dee ka bax Soomaalinimada. kkkkk
Ta kale ee Warsangelina aad ku asteysay Habar Awal ama Habar Jeclo inuu u dhigmo aan kaa yara saxo. Isaaq wuxuu u dhigmaa Daarood. Qabiilada waaweyn aaynu kasoo qaadno. Anigoon wax kaleba taaban. H.Awal oo kale waxay u dhigantaa Hartiga. Warsangeligu wuxuu la masaalo yahay oo kale marka hoos loo daadego, sida Beelaha Makaahiilka oo kale ama Reer Axmed ama Reer Gadiidka. Saaxiib yaa is tiriyay. Anaga iyo inta madaxa madow berigii la’iskugu sheekeyn jiray waa laga soo gudbay. Waxaa tahay la’iskama weyneeyo. Maanta Qowmiyad baad isku sheegtay. Berina Illaahay waxa uu wada abuuray Nebi Aadan iyo Daarood ayaad na odhan doontaa oo dhasha Nabi Aadan oo dhan iyo Daarood ayaad iskugu kaaya miisaami doontaa.
Kolkaas adiga iyo Dab La Ridayba waxaan idinkaga tegayaa. Isna odayadan baas ee uu kolba xabaalahooda soo faqayo haka hadho. Adna qabiiladan baas eed kolba darajo dalacsiinayso ka hadh.
Sidaadii baan kaaga hantaaticiyay mooyaan ee hadal aqoon iyo taariikhda cuskanaya ma aanad la shir imanin saaxiib. Faanka iyo fatooshka waa hore ayaan billad kugu siiyay ee iska soo shaqeyso inta aad cilmi iyo aqoon ku doodi karayso.
Baafin Baafin Ahmed Cudbi, Xaaji saalax, iyo Faqashtii SNM oo dhan.
Sheekadii waxay inoo maraysay wax walba waanu iska dhcin karnaa, hub culus ayaa wuxuu noogu jiraa makhsinada, geesiyaal aan la luudin Karin baan nahay, xuduudana waa soo xiraynaa.
Halka ay manta ka bilaabatay waa, waar yaa reer xamuunsheed ah oo ciidamo noo soo dira, ilma daafi-qudhmuune, ilma dameero guri-kula hoyde, ilma kaadida habeenkii guriga ku kaydsada, kuwaa anigu qadhmuunkooda ayaanba jeclayn, waligaa hadaad tagtay suuqoodana waxaa kazoo noqonaysaa adoo qurun kaasoo uraayo.
Horta kuwaa iyaga toodaaba ka badan oo inay cid idinka celiyaan haka yaabina ee dib intaad isugu noqotaan waxaad keerntaay shan kun oo dubno, kadibna idinkaa madax-wareerku idinka jabayaa, oo waxaa kala ogaanaynaas riyada qarawga ah iyo mid xaqiiqda dhabta ah la yiraahdo.
Tan kale mala socotaan sheekadii dhexmartay imaaraadka iyo Muuse yare????? magaranaysaan cidda uu la kulmay??? ma aragteen sawir qasriga boqortooyada? ninkan sanka dheer ee DP ayaa maqaaxi u kireeyay kadibana wuxuu u keenay sadex shaaha cabta oo imaaraati ah, kuwii la socday Muusena waxay keeneen warqado dawarsi, kolkay kala tageen ayaa xashhiishka la raaciya, ninka ay la kulmeen ee uGu weyn waa mid ina adeerkii RAASUL-KAHAYMA maamulo oonba lahayn wax sharaf ah iyo jago la yaqaan, halka dadka loogu sheekeeyay waxaanu la kulanay Maxamed bin ZAayid iyo Maxamed ibn Makhtuum??? waar mahaysaanm sawirkii mise waan idiin soo diraa???
Dawarsigu marna waa Itoobiya marna waa imaaraad tolow xagaa iyo Botuswaana iyo Hunduras kolmaad soo dawarsan doonaataan???????????????
Car bal sawirkii sheekha lala kulmay keena???????????????
Salaanta qaaligaa waan kaa gudoomay ee xagaa hore aad iigu dhaaftay, baryahan waxaan meel walba ka mariwaynay nin sumaysan oo basbaas intuu afka jarjaray faruuryihii barareen oo xitaa waxba ku cuni waayay, oo xitaa nuugidii kari waayay.
Hadaad basbaas ku karbaashtay qolyahan waxay u egtahay maxay ka nuugtaa maxayse ka nuugtaa, wuuba dawakhmay, waanad aragtay isaga hantaantac kula talinayay Ciroo oo leh somaalaaan soo raac…….iyo jeegaanteeda, waar wuxu miyuu waalan ayahay ma nin la dhacay baa sexanaya oo magaaladiisii berbera hortiisa lagu shitay, inuu xamar u cararo intay goori goor tahay wax u dhaama ma jiraa.
Basbaaskaa qaar iireeb mid yaroo saalax la yiraahdo oo aan waxba fahmayn baan rabaa inaan hurdada kaga kiciyee………KKKKKKKKKKKKK
@ Garaadkeena Sharafa Huwan: Garaad Ali,
NINYAHOW MAGACAA HA JIRO INTA AAD MUS YAR MUDH KA SOO TIDHAAHDO AYAAD MEESHAN OO DANSAN MAR QUDHA KAGA HILLAACISAA KKKKKKKKKKKK. BASBAASKA INTA AAD DOONTO KA SHUBO OO KU RUUG, KOLLAY XAAJIGU WAA SANAM SOO TAAGAN OO MABA DAMQADO EE. KU LAHAA:
“Horaa Loo Soconayaa”
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK HORAYDU U SOCDO WAA XERO BAAS IYO GUMEYSI AMXAARO ILLAYN HADDII UU DALKIISII SOOMAALIYA DHABARKA U DUWAY JIHADA KELI AH EE KA HORREYSAAYI WAA ITOOBIYA.
Suldaankayga Xaal buu kaa siiyey wax alaale wixii aad ka Tabanaysid,Aniguna Suldaankayga wixi Xaggiisa ka Dhacay Aniga Xaal Kale oo Gole Joog kaa siiyey.
Atoore Mushkiladda Taala Social Media waxay tahay haddaad Maamul goboleed mucaarad ku noqotid ama madaxweyne maamul goboleed mucaarad ku noqotid Qaar baa waxay u maleenayaan in Qabiil wax laga sheegaayo ama la Caayaayo qabiilkaas. Adiguna dabeecadaas waan kugu Arkay haddi puntland ama cabdiweli gaas wax laga sheego Dhiigkar baa kugu dhacaaya garan maayo sababta aad dadki puntland wax ka asaasay aad uga xigsatid.
Kolay anigu Dabeecadaas baynu isku khilaafnay hadda ka hor. Caadi iska dhig waa iska Kaftan siyaasadeed ma jiro wax MJ naga xiga ama naga xigsan kara. Ilasoco Atoore !
Maanshalah somaliland oo xafiis ganacsi ka furatay abudabi,iyo baasoboorka sl oo dhawaan loogu safri doono UAE
KHEYROOW SOO HOOBO
DREAM ama RIYADU Ceeb ma aha Laakin Riyadu waa in ay Noqotaamid Caqliga Geli karta.War Isaaqa oo dhan baa wata Somali Passport oo xajka ku taga,Xita madaxdiina ayaa wata somali passport. Somaliland passport ma aakhiro ayaa ka shaqeeyaa.
South Sudan passport keeda ayaan ka shaqayn Adduunka welina kuwaas ictiraaf bay haystaan.Ma waxaad u maleynaysaa ”’ Day Dreams Isaaqu ”’ ay Run Noqon karaan.
Sheekadaadu waxay u egtahay Ninki yiri waxaan ku Riyooday anigoo wata Kun neef oo geel ah iyo kun neef oo LO’ ah iyo kun neef oo adhi ah. Marku saaxiibkiis u sheegay Riyadi ayaa saaxiibkiis ku yiri war aniguna waxaan ku Riyooday Kun Libaaxa oo wada socda iyo kun Dhurwa oo wada socda iyo kun Dawaco oo wada socda. Ninki baa ku yiri oo maxaa keenay kun libaax ah iyo kun dhurwaa ah iyo kun dawaco ah.
Wuxu ugu jawaabay
1-kunka libaax waxay cunayaan kunka neef ee Geela ah ee aad wadatid
2-Kunka Dhurwa waxay Cunayaan Kunka neef ee Lo’da ah ee aad wadatid
3-Kunka Dawaco waxay Cunayaan Kunka neef ee adhiga ah ee aad Wadatid.
Naxaad sidaad ugu riyootay ayu ugu jawaabay. wuxu yiri anagoo biyo aanu cabno weynay oo safar ah ayaad ku Riyootay Kun neef oo geel ah iyo kun neef oo Lo’ ah iyo Kun Neef oo adhi ah.
Xaaji saalax Riyaddu Ceeb ma ah Waana Lacag la’aan, Kharash kaaga bixi maayo
Xaaji Saalax Ma Imaqlaysaaaaaaaaaaaaa !
Sxb Nin Naag Cadaan ah qaba oo Isaaq ah oo u shaqeeya ITV ama wariye ka ah oo ”Ey” wata ayuu wuxu damcay in uu sameeyo ” SOMALILAND NATIONAL LIBERARY ” dadki ayu whatsup u wada diray in qofki haya Bugaag ka sheekaynaya Taariikhda Isaaqa in la keeno si ” Somaliland National Libaerary ” loo dhigo. Qof wax keena waa la waayey sababta ma taqaanaa ma jiro Buug laga qoray Taariikhda Isaaqa. Aniga shalay la ila soo xidhiidhay bal in aanu keeno Bugaag ku saabsan Saldanadi warsangeli iyo heshiisyaddi engrisku la galay wax ka sheekaynaya, Kolay anigu waan diiday i aan keeno waxaan hayo oo la dhigo meel Isaaqa lagu xayeysiinaayo.
DEE MAXAAD KA TAARIKHAYSAN QURAYSH BAANU GALNAAYE,MEEL KALEBAHAKA DOONIN,AALI BAYTKII WEEUE.
WAAR MA ILA SOCOTAA
Maanta ma waxaad keentay Isaaqu waa Reer Bani Qureysh ! Anigu Reer Bani Khadar idinkoo sheegta ayaa igu kiin dambeysay.
Sheeko walba waa la idin ka maqlayaa.